माओवादी ‘निर्णायक’ तेस्रो शक्ति !- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
माओवादी ‘निर्णायक’ तेस्रो शक्ति !
‘प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा हाम्रो प्रगति भएको छ, पूर्ण परिणाम आउँदासम्म हामी अझै राम्रो स्थानमा हुन्छौं, एजेन्डा र नेतृत्वको हिसाबले हामी वामपन्थी शक्तिको मूल प्रवृत्तिमा छौं’
जेष्ठ ३, २०७९ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा दोस्रो शक्ति बन्ने दाबी गरे पनि उनको चाहना ‘निर्णायक तेस्रो स्थान’ जोगाउने थियो । यसमा मुख्य दुई कारण थिए– पहिलो, नेकपा विभाजनपछि पुराना माओवादी नेता पार्टीमा फर्केनन् । दोस्रो, माओवादीसँग नयाँ मुद्दा थिएनन् । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु माओवादीको बाध्यात्मक अवस्था थियो ।
एमालेबाट अलग रहेको एकीकृत समाजवादीलाई साथमा लिएर एमालेविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरी सत्ता र स्थानीय निर्वाचनबाट अस्तित्व जोगाउनु माओवादीका लागि चुनौती थियो । यो ‘मिसन’ मा दाहाल सफल मात्र भएनन्, सोमबारसम्मको निर्वाचन परिणामअनुसार पार्टीलाई ‘सुरक्षित स्थिति’ मा पनि पुर्‍याएका छन् । तेस्रो शक्तिको हैसियतले माओवादीले आगामी दिनमा सत्ता सञ्चालनमा ‘निर्णायक’ भूमिका खोज्नेछ । दाहालले चाहेको पनि यही हो ।
यो निर्वाचनबाट दोस्रो शक्ति बन्न नसके पनि पछिल्लो मत परिणाम सन्तोषजनक देखिएको माओवादी नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘प्रारम्भिक परिणाम हेर्दा हाम्रो प्रगति भएको छ, पूर्ण परिणाम आउँदासम्म हामी अझै राम्रो स्थानमा हुन्छौं,’ पुनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एजेन्डा र नेतृत्वको हिसाबले हामी वामपन्थी शक्तिको मूल प्रवृत्तिमा छौं । संख्या केही तलमाथि हुन सक्छ तर हाम्रो एजेन्डामा देश चल्दै आएको छ ।’ एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदनपछि माओवादीलाई क्षति पुग्ने आकलन गरिएको थियो तर यो निर्वाचनमा त्यसको खासै असर देखिएन । माओवादीले सत्ता गठबन्धनबाहेक एक्लै पनि नयाँ पालिकामा चुनाव जितेको छ ।
गत फागुन तेस्रो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्वाचनमा दोस्रो शक्ति बन्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । एमसीसी अनुमोदन, पदाधिकारीविहीन पार्टी, अधुरो केन्द्रीय कमिटी, पार्टीभित्रै असन्तुष्टि, भद्रगोल संगठन र आफ्नै खस्किँदो छविका बीच दाहालको प्रक्षेपण धेरैका लागि अस्वाभाविक र असम्भवजस्तो लागेको थियो । ‘पहिलो भन्ने मनोगत हुन्छ, भूमिका पहिलो नै हो, उम्मेदवार चयनदेखि भौतिक तयारी राम्रो भए दोस्रो सजिलै हुन्छौं,’ उनले बैठकमा भनेका थिए । प्रक्षेपण गरेजस्तो दाहालले माओवादीलाई दोस्रो ठूलो शक्ति बनाउन सकेनन् तर ०७४ भन्दा कमजोर हुन पनि दिएनन् । उनले स्थानीय निर्वाचन माओवादीका लागि जीवन–मरणको सवाल रहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
दाहाल माओवादीलाई खासमा पहिलो वामपन्थी शक्ति बनाउन चाहन्थे । यसका लागि उनले तयार पारेको सूत्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच देशव्यापी तालमेल गर्ने, एकीकृत समाजवादीमार्फत एमालेलाई कमजोर पार्ने, मधेसमा जसपाको बलमा धेरै शक्ति हासिल गर्ने र संविधान, लोकतन्त्र र प्रगतिका पक्षधर शक्तिहरूबीच गठबन्धन भएको प्रचार गर्दै राजनीतिक लाभ लिने ।
दाहालका तीनवटा सूत्रले काम गरे पनि देशव्यापी तालमेल गर्ने प्रयास सफल भएन । कांग्रेसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्ने निर्णय गरेपछि अन्तिमसम्म पनि देशव्यापी तालमेल गर्ने दाहालको प्रयासले मूर्तरूप लिएन । यही कारण पार्टीलाई दोस्रो बनाउने उनको योजना पूरा हुने अवस्था देखिएको छैन । पाँचदलीय गठबन्धनबीच देशभर २०९ पालिकामा मात्रै तालमेल भएको थियो । त्यसमध्ये माओवादीको भागमा ४९ पालिका परेका थिए । सेटमा गठबन्धन नभएका कतिपय ठाउँमा कांग्रेस–माओवादी, एकीकृत समाजवादी–माओवादी, जसपा–माओवादीबीच आंशिक तालमेल भएको थियो । अर्कोतर्फ माओवादीविरुद्ध केही जिल्लामा कांग्रेस, एमालेलगायत दलले तालमेल गरेका थिए ।
सोमबार रातिसम्मको परिणामअनुसार माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । ०७४ मा १०६ पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष जितेर माओवादी तेस्रो शक्ति बनेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा माओवादीले ०७४ मा जितेका केही ठाउँ गुमाएको छ । जस्तो कि ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा एक्लै जितेको माओवादीले यसपटक कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि जित्न सकेन । ०७४ मा एक्लै जितेको जुम्लाको हिमा गाउँपालिका, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ र लिखुपिके गाउँपालिका, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका पनि यसपटक गुमाएको छ । यी सबै पालिका अहिले कांग्रेसले जितेको छ ।
यस्तै आफ्नो गढ मान्दै आएको रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका पनि माओवादीले गुमाएको छ । यो पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ । यहाँ माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । रोल्पाबाहेक कालीकोट, पश्चिम रुकुम, सल्यानलगायत केही जिल्लाका कतिपय पालिकामा माओवादीविरुद्ध कांग्रेस र एमालेबीच तालमेल भएको थियो । पुराना केही गुमाए पनि कतिपय नयाँ पालिका माओवादीले कांग्रेस र एमालेबाट खोसेको छ । कतिपय पालिकामा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर माओवादीले जित हासिल गरेको छ । ०७४ मा एक पालिका पनि नजितेको माओवादीले दैलेखमा एकीकृत समाजवादीसँग तालमेल गरेर दुई पालिका जितेको छ । त्यहाँ ०७४ मा एमालेले जितेको थियो ।
यस्तै गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका एमालेसँग तालमेल गरेर माओवादीले अध्यक्ष जितेको छ । प्यूठानको झिमरुकमा पनि एमालेसँग तालमेल गरेको छ तर यो समाचार तयार गर्दासम्म पूर्ण परिणाम आइसकेको छैन । ‘२०९ स्थानमा मात्रै सत्ता गठबन्धनबीच तालमेल भएको छ, अन्यत्रमा मुख्य दलहरू आ–आफ्नै तरिकाले प्रतिस्पर्धामा उत्रिए,’ माओवादी नेता पुनले भने, ‘केही ठाउँमा कांग्रेस–एमालेबीच तालमेल भएको छ । केही ठाउँमा माओवादी र एमालेबीच पनि भएको छ । अधिकांशमा एक्लाएक्लै लडिएको छ । त्यसकारण जे परिणाम आएको छ, त्यो सन्तोषजनक छ ।’
नेकपा भंग भएपछि माओवादी नयाँ गठबन्धनसहित चुनावमा गएको थियो । माओवादीका अर्थमन्त्री रहेका बेला केही सूचकहरू नकारात्मक बनेको र छोरी रेनुलाई भरतपुरको प्रमुखमा दोहोर्‍याउन मरिहत्ते गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला दाहाल चुनावी मैदानमा उत्रेका थिए । तर, तल्लो तहमा रहेको परम्परागत संगठन र केन्द्रबाट भएको तालमेलले माओवादीलाई राहत दिएको देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगले पनि हानि गर्छ कि भन्ने भय थियो । त्यसबाहेक एमसीसी अनुमोदनमा खेलेको भूमिकाले पनि माओवादीलाई हानि गर्ने आकलन थियो ।
चुनावी अभियान पनि अन्य दलका तुलनामा माओवादीको कमजोर थियो । यतिसम्म कि माओवादीले स्थानीय निर्वाचनका लागि भनेर घोषणापत्रसमेत बनाएको थियो । एउटा अपिल जारी गरेर मत मागेको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय चुनावमा लगाउनेसहितको दुई महिने चुनावी अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । अभियानमा घरघरमा सदस्यता वितरण, पालिकास्तरमा घोषणापत्र बनाउने, मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारको सूची बनाउने, भेला–प्रशिक्षण चलाउने, सदस्यता वितरण गर्ने र सबै तहका कमिटीलाई पूर्णता दिनेलगायतका कार्यक्रम गरेको थियो ।
चुनावी कार्ययोजनासँगै कार्यान्वयनका लागि माओवादीले प्रदेश इन्चार्जहरू तोकेको थियो । दाहाल आफैं विभिन्न जिल्लामा पुगेर प्रशिक्षण पनि दिएका थिए । एमाले नेताहरूले मुलुकमा दुई दल भए पुग्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि दाहालमाथि दबाब बढेको थियो । महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीले पार्टी सदस्यता संख्या पनि बढाएर झन्डै आठ लाख पुर्‍याएको उल्लेख गरेको थियो ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०७:२५
एमालेको विश्लेषण किन मिलेन ?
धाँधली भयो भनेर विज्ञप्ति निकाल्न पार्टीले हतार गरेको पदाधिकारीकै टिप्पणी
जेष्ठ २, २०७९ बबिता शर्मा
काठमाडौँ — चुनावी रणनीति र उम्मेदवारका मापदण्ड तय गर्न गत चैत ९ मा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी पहिलो शक्ति बन्ने विश्लेषणसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ओलीको प्रतिवेदनमा एमालेले स्थानीय निर्वाचन जित्ने १८ वटा आधार पेस गरिएको थियो ।
यसैका आधारमा एमालेले केन्द्रीय तहमा गठबन्धन नगरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले एमाले पहिलो पार्टी नबन्ने देखाएको छ ।
२०७४ को स्थानीय चुनावमा २ सय ९४ पालिका जितेर पहिलो दल एमाले यसपटक दोस्रो शक्ति बन्ने देखिएको छ । एमालेले जित्ने अपेक्षा गरेका काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज महानगर र बुटवल, घोराही, धरान, इटहरीलगायत उपमहानगरको मतगणनामा गठबन्धनकै दलले अग्रता लिइरहेको छ । एमालेले भने मत परिणाम आइनसक्दै गठबन्धनले ‘धाँधलीको सहारा’ लिएका कारण हार बेहोर्नुपरेको टिप्पणी गरेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले तीन चरणमा सत्ता गठबन्धनले धाँधली गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदानपूर्व, मतदानका बेला र मतगणनामा धाँधली भएको जनाएका छन् । ‘सत्ता गठबन्धनले लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक अभ्यासको खिल्ली उडाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एमालेले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग पुग्ने गरी गृह प्रशासनद्वारा प्रहरी र कर्मचारी खटाइएको, आफ्ना मतदातालाई हतोत्साहित गर्न अघिल्लो दिन गिरफ्तार गरेको र मतदानपछि छाडेको आरोप लगाएको छ ।
परिणाम सत्ता गठबन्धनको पक्षमा पार्नका लागि विभिन्न जिल्लामा बुथ कब्जा गरेको, मतगणना स्थलमा मतपेटिका पुर्‍याउन जाने क्रममा उम्मेदवारका प्रतिनिधिलाई मतपेटिका राखिएको सवारीसाधनमा साथै जान रोक लगाएको, कतिपय स्थानमा सुरक्षित राखिएको बाकसको सिल तोडिएको पाइएको दाबी एमालेले गरेको छ । एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई योजनाबद्ध धाँधली तुरुन्त रोक्न पनि माग गरेको छ ।
एमालेकै एक पदाधिकारीले भने निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा नआउनु ‘धाँधली’ मात्रै कारण नभएको बताए । ‘पाँचदलीय गठबन्धनसँग एक्लै चुनाव लड्नु सहज होइन । पहिलो कारण त यही नै हो । यसबाहेक पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई मिलाएर लैजान नसक्नु, टिकट वितरणमा नवप्रवेशीलाई प्राथमिकता दिनु तथा नेतृत्वबाट वस्तुसंगत विश्लेषण हुन नसक्नु नै अपेक्षाकृत नतिजा नआउनुको कारण हो,’ उनले भने । उनका अनुसार निर्वाचन अगाडि एकीकृत समाजवादीको शक्तिलाई अवमूल्यन गर्नु पनि एमालेका लागि धक्का खाने विषय भएको छ ।
मत परिणाम नआइसक्दै ‘सत्ता गठबन्धनले धाँधली गर्‍यो’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्दा एमाले हतासमा देखिएको सन्देश गएको ती पदाधिकारीले बताए । ‘कम्तीमा चुनाव सकिन त दिनुपर्छ । चुनाव सकिएपछि गम्भीर रूपले समीक्षा गरेपछि पो विज्ञप्ति निकाल्ने हो । देशभरि चुनाव हुँदा आफूले भनेजस्तो कहाँ हुन्छ ? कतै धाँधली पनि भए होला रे । मत परिणाम नआउँदै हतपत धाँधली भयो भन्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘हामीले महत्त्वाकांक्षा बढी भयो भनेका हौं । त्यो पूरा नहुने देखेपछि विज्ञप्ति निकालेर धाँधली भयो भनिदिए । पहिला माओवादीले यसै भयो भन्थ्यो ।’
हुन त अध्यक्ष ओलीले स्थानीय निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका थिए । ‘यो निर्वाचन सामान्य, नियमित र सहज अवस्थामा हुँदै छैन । यो त जनादेश र परमादेशबीचको जनमत संग्रहका रूपमा हुँदै छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षधर र बाह्य शक्तिहरूका लागि कम्फर्टेबलहरूका बीचमा हुँदै छ । राजनीतिक स्थायित्वका पक्षधर र अस्थिरताका संवाहकहरूबीच हुँदै छ । समृद्धि कि बर्बादी, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको रक्षा कि मानमर्दनबीचको छनोटका रूपमा हुँदै छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा लेखेका थिए ।
ओलीको प्रतिवेदनमा एमालेको सही सिद्धान्त र नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको पक्षमा खेलेको प्रभावकारी भूमिका तथा सरकारमा रहँदा समृद्धिका लागि गरेको कामका आधारमा जितिने उल्लेख छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको थालनी, विपत्ति र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खेलेको भूमिका, सीके राउत समूह र नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन गरेको अगुवाइलाई पनि एमालेले जित्ने आधार ठानेको थियो । ‘हामीसँग जितका पर्याप्त आधार छन् । यावत् घेराबन्दी, आक्रमण र दुष्प्रचारका बीचमा पनि हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वास अखण्डित र अक्षुण्ण रहनु एवं यस्तो जनविश्वास दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु नै त्यो मुख्य आधार हो, जसले एमालेको जितलाई सुनिश्चित गर्नेछ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा थियो, ‘गठबन्धन या मोर्चा सामर्थ्यको प्रतीक होइन, कमजोरीको द्योतक हो । बैसाखीको सहारा त्यसलाई मात्र चाहिन्छ, जसका खुट्टा कमजोर छन् । त्यसैले गठबन्धनको यो मनोवैज्ञानिक भ्रम या भयबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।’
एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मधेसबाहेक अन्य प्रदेशमा पार्टी पहिलो हुने नेताहरूको रिपोर्टिङ थियो । एमालेले मधेसमा अभूतपूर्व लहर देखिएको भन्दै त्यसले त्यहाँको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन गर्ने दाबी गरेको थियो । निर्वाचन हुनु ठीक अघि भने सत्ता गठबन्धन र एमाले विभाजनका कारण अपेक्षा गरेअनुसार पार्टीको परिणाम आउन नसक्ने रिपोर्ट ओलीलाई आएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अनुमानसँग नतिजा मेल खाने देखिएन । अहिलेको नतिजाले संघीय चुनावमा असर गर्न सक्छ । त्यसकारण कार्यकर्ताको मनोबल गिर्न नदिन धाँधली भयो भनिएको होला । विज्ञप्ति निकाल्ने विषयमा हामीसँग सल्लाह गरिएन । हामी सबैजसो जिल्लामा छौं,’ एमालेका अर्का एक पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
एमालेले महानगर र उपमहानगरलाई प्रतिष्ठा बनाएको थियो । त्यसका लागि रणनीतिक रूपमा केशव स्थापितदेखि विजय सरावगीसम्मका व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको थियो । एमालेले महानगरमा राप्रपा र लोसपासँग समेत तालमेल गरेको थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार महानगर र उपमहानगरमा एमालेका लागि सन्तोषजनक स्थिति देखिएको छैन । महानगर र उपमहानगर जित्न नसके राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो सन्देश नजाने एमालेको बुझाइ छ ।
एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको विश्लेषणमा मुख्यतः चार कारणले एमाले दोस्रो शक्ति बन्ने देखिएको हो । ‘पहिला त गठबन्धन दलले सत्ताको अधिकतम दुरुपयोग गरे, त्यसका धेरै उदाहरण छन् । दोस्रो, चार–पाँच पार्टी मिलेर पनि करोडौं पैसाको चलखेल गरे, त्यसले पनि प्रभावित गर्‍यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘तेस्रो, पाँच दल मिले भन्दा मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतदातामा देखियो । चौथौ, हाम्रोतर्फबाट कतिपय पालिकामा प्रमुख/अध्यक्ष दोहोर्‍यायौं तर मान्छेले परिवर्तन चाहँदा रहेछन् भन्ने पनि देखियो ।’
प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०७:२७